Umndeni ogijimayo we-Bed & Breakfast Lodge - I-Airbnb
Umndeni ogijimayo we-Bed & Breakfast Lodge
Haverfordwest, i-United Kingdom
I-Walkers Lodge ihlinzeka ngendawo yokuhlala enhle ehlanzekile, kumagumbi okulala ayi-4 namagumbi amabili omndeni. Izivakashi nazo zisebenzisa indawo yethu yokuphumula enkulu/igumbi lokudlela elinethezekile, eline-TV enkulu, i-WIFI, kanye ne-logburner. Kufakwe enanini ikhaya lethu lesidlo sasekuseni "esi-Welsh", ukudla kwakusihlwa kanye nezidlo zasemini ezipakishiwe zitholakala ngesicelo, h ngenani lika-£10 no-£5 lilinye. Siphinde futhi sinikeze isevisi ye-BBQ ngaphandle kwethala ngama-£10 umuntu ngamunye. (iminithi kubantu abangu-4)
I-Walkers Lodge itholakala kahle enhliziyweni yePembrokehire Coast National Park futhi iyintandokazi eqinile yabahambi nabahamba ngamabhayisikili ngokufanayo. Ibhasi le-Puffin lime likhuphuka nje ngomgwaqo, ngakho-ke uma usunele ukuhamba vele ugxumele ebhasini ulivumele likubuyisele emuva. Sisendaweni eyimizuzu emi-5 nje uma ushayela usuka eMartinshaven lapho ungabamba khona isikebhe uwele eSkomer Island (okuwukuphela kwendawo yokulondoloza imvelo yasolwandle eBrithani) ukuze ubone izilwane zasendle (ama-puffin ayikhaya lokuhlala ngo-April- maphakathi no-August) umbono ongaphuthelwa. .
Kulabo abafuna ezinye izinto ezithokozisayo ezimbalwa, kuhlala kune-Oakwood Theme Park, iFolly Farm noma i-Manor Park Zoo. Noma ngabe izintaba zakhona, emaphandleni, izinqaba noma ulwandle olufunayo, iPembrokeshire inakho konke.
E-Walkers Lodge singakwazi ukuhlalisa amaqembu abantu abangafika kwabangama-24, Sitholakala endaweni ekahle yohambo lokutshuza, ukuqasha izikebhe/ukugcwalisa umoya kungahlelwa. I-Pembrokeshire inezindawo eziphahlazeka ezinhle kakhulu ongatshuza ngazo noma ungahlola indawo yokulondoloza imvelo yasolwandle ezungeze iSkomer Island.
UKaren noChris babheke ngabomvu ukuhlangana nani nonke, isiqubulo sethu sithi "umlilo ofudumele nokwamukela ngemfudumalo e-Walkers Lodge"
4.71 · 132 okushiwo abanye
Izivakashi zingaqoqwa eziteshini zamabhasi/zesitimela futhi zilethwe endaweni yokulala, ngenani elingu-£10 lokumboza uphethiloli.